Ciidanka Puntland oo dilay 20 Al-Shabaab katirsan | KEYDMEDIA ONLINE
BOOSAASO, Soomaaliya - Ciidanka maamulka Puntland ayaa fuliyay howlgal ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab ee ku sugan duleedka magaaladda Boosaaso, xarunta gobolka Bari.
Saraakiisha amniga ayaa xaqiijiyay in 20 xubnood oo katirsan lagu dilay howlgalka, afar kalena nolosha lagu soo qabtay, waxaana la sheegin khasaaraha Ciidanka soo gaaray.
Hwolgalka waxay Ciidanka ugu jawaabayay weerarkii Habeenkii Khamiista Al-Shabaab ku qaaday saldhigga Boosaaso, kaasoo lagu sii daayay maxaabiis gaaraya illaa 400, oo Daacish iyo Al-Shabaab isagu jira.
Madaxweyne Deni ayaa ku sugan Boosaaso oo shalay uu gaarey kadib weerarka Xabsiga, isagoo kulan la leh Saraakiisha amniga iyo kan maamulka gobolka Bari.
Al-Shabaab iyo Daacish ayaa ku xoogan Buuraha Galgala oo ku dhaw Boosaaso, waxayna ka qaadaan Ganacsatada Canshuur baad ah, iyagoo dila qofkii kahor yimaada dalabkooda.